म कसरी मेरो ब्लगमा ट्राफिक टार्गेट गर्ने छु? | यातायात सम्बद्ध गर्न
by बेभर्ली सानो on 11 सक्छ, 2021
म कसरी लक्ष्य गर्ने यातायात मेरो ब्लगमा?
तपाईंले आफ्नो विशिष्ट कोठा पहिचान गर्नुभयो र उपयोगी र सहयोगी ब्लग साइटहरू बनाउन शुरू गर्नुभयो जुन तपाईं एकदमै सकारात्मक हुनुहुन्छ पाठकहरूको संख्या र निम्नमा। तपाइँको यातायात तथ्या .्क पनि यस्तै कुनै चेक आउट। ठिक छ, तपाईंले बुझ्नु पर्दछ कि तपाईंले लक्षित गर्नु पर्छ यातायात!
सामान्यतया, ब्लग लेखकहरू, विशेष गरी तिनीहरू जो ध्यान दिँदैनन् यातायात तथ्या ,्क, कसरी थाहा छैन कि तिनीहरू कसरी तथाकथित ट्राफिक प्राप्त गर्न सक्छन्। धेरै ब्लग लेखकहरू अब यातायात बनाउने सारको बारेमा चिन्तामा निर्भर छन् र यसले कसरी अनलाइन अस्तित्वमा थप गर्दछ। तपाईलाई सचेत गराउन पर्याप्त कारक हुन्छ जब तपाईले जाँच गर्नु भएको कुराको कसैले ध्यान दिदैन।
ब्लगिंग एक सम्पत्ति हुन सक्छ
यदि तपाईं सक्रिय हुनुहुन्छ भने ब्लगिंग, तपाइँ निश्चित रूपमा तपाइँका प्रयासहरू प्रदर्शन गर्न र यसलाई लोकप्रिय बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि केवल तपाईंले बुझ्नुहुन्छ कि तपाईंले के अपेक्षा गर्नुहुन्छ, तब, तपाईं निश्चित रूपमा आफूलाई बढावा दिन सक्नुहुन्छ र निम्न उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ।
यहाँ चिन्ताको विषय छ, कसरी तपाईं आफ्नो ब्लग साइट को लागी यातायात उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ? दिमागमा राख्नुहोस् कि यातायात को एक पर्याप्त मात्रा सबै तपाईं आफ्नो ब्लग साइट को प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। तपाईंको अन्तरदृष्टिलाई सफल र लोकप्रिय प्रयासमा बदल्नको लागि, यी सुझावहरू दिमागमा राख्नुहोस्।
बसोबास गर्नुहोस् लक्षित ट्राफिक राम्रो बिक्रीको लागि रहस्य हो!
तपाईको ब्लग साइट को लागी एक ई-मेल सदस्यता प्रकार छ सबै सेट अप। सदस्यता लिन यसले तपाईंको नेटवर्कमा व्यक्तिहरूलाई स्वागत गर्दछ। तपाईं आफ्नो सापेक्षिक, सहकर्मीहरू, ग्राहकहरू, साझेदारहरू, र राम्रो साथीहरूसँग सुरू गर्न सक्नुहुनेछ।
पढ्नुहोस्, अनुसरण गर्नुहोस्, र अन्य व्यक्तिको ब्ल्ग साइटहरूको बारेमा कुरा गर्नुहोस् जुन तपाईंको लक्ष्य विशेष कोठामा छन्। उपयोगी, उपयोगी, र स्मार्ट टिप्पणीहरू रचना गर्न निश्चित गर्नुहोस् किनकि त्यसले तपाईंको दर्सा गर्दछ ब्लगिंग क्षमता। तपाईलाई अरुको चासो लाग्नु पर्छ, सम्भवतः उनीहरू तपाईको आफ्नै कामको लिंकलाई पछ्याउँदछन्।
Ping-O-Matic प्रकार्य पिंग गर्ने ब्लग साइट निर्देशिका साइटहरू प्रयोग गर्नुहोस् जब तपाईं जारी गर्नुहुन्छ।
तपाइँको ब्लग साइटहरु लाई अनलाइन खोज ईन्जिन र ब्लग साइट निर्देशिका साइटहरुमा पठाउनुहोस्। तिनीहरू मध्ये एक ठूलो सम्झौता आजकल पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र आउँछ।
तपाईंको ब्लग साइटहरूमा लिंक समावेश गर्न नभुल्नुहोला ईमेल हस्ताक्षर फाइलमा तपाईंले आपूर्ति गर्नुहुन्छ।
लगातार तपाईंको साइटको पृष्ठहरूमा वा तपाइँले प्रस्ताव गरेको कुनै समाचारपत्रमा लिंक आपूर्ति गर्नुहोस् र बाहिर निस्कनुहोस्। तपाईंले उत्पादन गर्ने सबै प्रकारका पत्राचारहरूमा यो गर्नुहोस्।
बसोबास गर्नुहोस् थप विधिहरू तपाईंको वेबसाइटमा ट्राफिक लक्षित गर्न
यदि तपाईं बिक्री ब्रोशर, सेवा कार्ड, र मार्केटिंग टेकनीकको लागि पर्चा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईंको ब्लग साइटको URL प्रिन्ट गर्न निश्चित गर्नुहोस्।
यो RSS फिड URL हुन व्यवस्थित गर्दछ जसमा व्यक्तिहरूले द्रुत रूपमा दर्ता गर्न सक्छन्।
ध्यान दिनुहोस् तपाइँको ब्लग साइटमा अधिक ग्राहकहरु लाई आकर्षित गर्न अपडेट प्रकाशित गर्नुहोस्।
तपाईंको विचारमा यी विचारहरू समावेश गर्नाले तपाईंलाई तपाईंको ब्लग साइटहरू प्रमोट गर्न मद्दत गर्दछ। केवल त्यो मात्र होईन, यस्तै तपाईंलाई पनि ट्राफिक लक्षित गर्न!
तपाईंले आफ्नो विशिष्ट कोठा पहिचान गर्नुभयो र उपयोगी र लाभदायक ब्लग साइटहरू बनाउन शुरू गर्नुभयो जुन तपाईं वास्तवमै सकारात्मक हुनुहुन्छ पाठकहरूको संख्या र निम्नमा आकर्षित हुनेछ। यहाँ चिन्ताको विषय छ, कसरी तपाईं आफ्नो ब्लग साइट को लागी यातायात उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ? दिमागमा राख्नुहोस् कि यातायात को एक पर्याप्त मात्रा को लागी तपाइँको ब्लग साइट को प्रभावकारी बनाउन को लागी सबै आवश्यक छ। तपाईको ब्लग साइट को लागी एक ई-मेल सदस्यता प्रकार छ सबै सेट अप। पढ्नुहोस्, अनुसरण गर्नुहोस्, र टिप्पणी अन्य व्यक्तिको ब्लग साइटहरूमा जुन तपाइँको लक्षित विशिष्ट कोनिका भित्र हुन्छन्।
दायर अन्तर्गत: ब्लगिंग, लक्षित ट्राफिक